Art is My Life: Brain Drain လား Brain Gain လား
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 2:38 AM
Thanks for your comments ko soe zayya. I also had some view to your post at my blog too. :)
Soezeya ရဲ့ ကိုးကားတင်ပြချက်လေး အလွန်ကောင်းပါတယ်။
ပြင်ပကမ္ဘာမှာ Migration ဟာရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ Phenomenon တစ်ခုဖြစ်လာတာ ကြာပါပြီ။ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ (၂၆) နှစ် တံခါးပိတ်ခံထားရတဲ့ အတွက် နိုင်ငံခြားကို ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းကို အပြစ်တစ်ခု၊ တိုင်းပြည်အတွက် ဆုံရှုံးမှုတစ်ခုလို့ မြင်နေကြဆဲပါ။